Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Janoary 2020 à 15:42
76 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Desambra 2019 à 17:59 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Janoary 2020 à 15:42 (hanova) (esory)
Ny '''fiteny sino-tibetana''' dia [[fianakaviam-piteny]] any [[Azia Atsinanana]] sy [[Azia Atsimo Atsinanana]] sy [[Azia Afovoany]] ary [[Azia Atsimo]]. Isan'io fianakaviam-piteny io ireo [[fiteny sinoa]] izay ahitana fiteny folo tetenin'ny olona miisa 1 350 000 000 any ho any, sy ireo [[fiteny tibeto-birmana]] izay ahitana fiteny miisa 330 any ho any ary tenenin'ny olona miisa 70 000 000 any hoany.
Ilay mpiokarokampokaroka atao hoe Laurent Sagart dia nanolo-kevitra ny hampiditra ny fianakaviam-piteny sino-tinetanatibetana sy ny fianakaviam-piteny [[Fiteny aostroneziana|aostroneziana]] ao amin'ny fianakaviambem-piteny atao hoe sinotinetana-aostroneziana. Ireo fiteny aostronesiana izay miely ahtratyhatraty [[Madagasikara]] ka hatrany amin'ireo nosin'i Pasifika dia samy nipoitra avy any Taioàna, sady manana voanteny mifanahaka endrika sy hevitra amin'ireo fiteny formiziana.
Misy sampana efatra lehibe ny fianakaviam-piteny sino-tibetàna, dia: ny sampam-piteny sinoa na [[Fiteny sinitika|sinitika]], ny sampam-piteny [[Fiteny tibetika|tibetika]], ny sampam-piteny lolo-birmàna ary ny sampam-piteny karena. Misy koa fiteny maro hafa izay tsy isan'ireo sampam-piteny ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/979614"